China FOB Ọsọ ule na-emepụta na ndị na-ebu ya | Na-adanye Bio
BTER US Jiri
Nzọụkwụ dị ike®FOB Rapid Test Strip (Feces) bụ immunoassay na-ahụ ngwa ngwa maka nchọpụta ike nke ikike nke hemoglobin mmadụ na ụdị nsị mmadụ. Ebumnuche a ka ejiri mee ihe dị ka ihe enyemaka na nyocha nke ọrịa mgbatị ala (gi).
Ọrịa cancer bụ otu n'ime ọrịa cancer a na-ahụkarị yana isi ihe kpatara ọrịa kansa na United States. Nyocha maka ọrịa kansa na-eme ka nchọpụta kansa rịa elu n'oge mbụ, yabụ na-ebelata ọnwụ.
N'oge gara aga, ule FOB jiri ule guaiac mee ihe, nke chọrọ mgbochi nri pụrụ iche iji belata nsonaazụ ụgha na nsonaazụ ụgha. A na-ahazi FOB Rapid Test Strip (Feces) iji chọpụta haemoglobin mmadụ na ntanetị site na iji usoro Immunochemical, nke mere ka ọ dịkwuo mma maka nchọpụta nke eriri afọ ala. nsogbu, gụnyere ọrịa cancer na adenomas.
Ezubere FOB Rapid Test Strip (Feces) iji chọpụta hemoglobin mmadụ site na nkọwa ntụgharị nke mmepe agba na warara dị n'ime. Emere akpụkpọ ahụ yana ọgwụ nje hemoglobin na-emegide mmadụ na mpaghara ule. N'oge ule ahụ, a na-ahapụ ụdị ahụ iji meghachi omume na mgbochi mmadụ hemoglobin antibodies colloidal gold conjugates, nke a na-etinye na mpempe akwụkwọ nke ule ahụ. Ngwakọta ahụ na-agagharị na akpụkpọ ahụ site na ọrụ okpu, ma soro ndị na-emegharị ihe na-arụ ọrụ na akpụkpọ ahụ. Ọ bụrụ na haemoglobin mmadụ zuru ezu n'ụdị, eriri nwere agba ga-etolite na mpaghara ule nke akpụkpọ ahụ. Ọnụnọ nke ụdọ a na-acha agba na-egosi nsonaazụ dị mma, ebe enweghị ya na-egosi nsonaazụ na-adịghị mma. Ọdịdị nke otu agba nwere agba na mpaghara njikwa na-eje ozi dị ka njikwa usoro. Nke a na-egosi na agbakwunyela ụdị nke ezigbo ihe atụ ma na-eme ka akpụkpọ ahụ pụta.
■ Maka ndị ọkachamara na vitro na-eji naanị achọpụta ọrịa.
Not Ejila mgbe ụbọchị ngwụcha gosipụtara na ngwugwu ahụ. Ejila ule ahụ ma ọ bụrụ na akpa mpempe akwụkwọ mebiri emebi. E jikwala ule.
■ Ngwa a nwere ngwaahịa sitere na anụmanụ. Ihe omuma edebere banyere mmalite na / ma obu onodu ocha nke anumanu adighi ekwenye kpamkpam na enweghi ihe ndi oria ojoo. N'ihi ya, a na-atụ aro ka ngwaahịa ndị a mee ka ihe nwere ike ibute ọrịa, ma jikwaa ya site na ịdebe nchekwa nchekwa na mbụ (dịka, etinyela ma ọ bụ iku ume).
Zere imebi ihe nlele site na iji mkpoko ihe nkpuru ohuru maka nke obula.
Jiri nlezianya gụọ usoro ahụ dum tupu ule.
Erila nri, a drinkụ ma ọ bụ anwụrụ anwụrụ na mpaghara ọ bụla ebe a na- eme ihe nlele na ngwa iwu. Mee ụdị niile dị ka a ga - asị na ha nwere ihe na - efe efe. Leba anya na nchedo anya megide ihe egwu microbio na usoro niile ma soro usoro iji wepụta ihe nlele. Yiri uwe nchebe dịka uwe mkpuchi, uwe a na-ekpofu ekpofu na nchedo anya mgbe a na-eme ụdị ahụ.
■ Ihe eji achọ mmiri mmiri na-echekwa nwere sodium azide, nke nwere ike iji nzaghachi ma ọ bụ pọmpụ ọla kọpa mepụta ọla edo nwere ike ịgbawa. Mgbe ị na-ekpofu ihe eji eme ihe ma ọ bụ nke a na-amịpụtara, jiri mmiri buru ibu na-agbanye mmiri mgbe niile iji gbochie azide.
Agbanyela ma ọ bụ agwakọta ngwakọta nke si na nza dị iche iche.
Iru mmiri na ọnọdụ okpomọkụ nwere ike imetụta mmetụta dị njọ.
■ A ga-atụfu ihe eji arụ ọrụ ule dịka ụkpụrụ mpaghara si dị.
Nke gara aga: Trichomonas ikpuru & Candida
Osote: Fungal fluorescence nsị ngwọta
Fob Rapid Ule
Fob Rapid Test Ngwaọrụ
H. Pylori Ag Ngwa Ule Na-achọpụta Antigen, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Nnwale Nnwale, Igm / Iggrapid Ule Nnwale, Akwụkwọ akụkọ Coronavirus Rapid Test Ket, Coronavirus Maka Covid-19 Ule, Coronavirus Antigen Nnwale Ngwa,